Google Chrome မှာ မှတ်ထားတဲ့ Password တွေကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲ? – MyTech Myanmar
Google Chrome မှာ မှတ်ထားတဲ့ Password တွေကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲ?
ဒါပေမယ့် Google ကနေ Chrome Browser နောက်ဆုံး Update မှာ Browser ကနေ မှတ်ထားတဲ့ Password တွေကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Desktop Browser ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Setting – Manage Password ကနေ ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ Website ရဲ့ Login Password ကို ကြည့်လို့ရတော့မှာပါ။
MyTech Myanmar2018-05-15T10:24:38+06:30May 15th, 2018|HowTo, Mobile Phones|